Uncategorized – Annapurna Post News
May 17, 2022 sujaLeaveaComment on प्रधानमन्त्री देउवाको यस्तो काण्ड बाहिरियो, निहुरियो सिंगो देशकै शिर !
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशकै निहुरिने काण्ड गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । देशकै कार्यकारी प्रमुख रहेका देउवाले व्यक्तीमा हुनुपर्ने संस्कार समेत देखाउन नसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को आलोचना भइरहेको हो । आज लुम्बिनीमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग एक प्रार्थनामा सहभागी भए । मायादेवी मन्दिरभित्र भएको प्रार्थनाका क्रममा देउवाको पोजलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन […]
May 16, 2022 sujaLeaveaComment on भरतपुरमा रातारात चमत्कार, रेणु दाहाललाई झड्का, एमालेका विजय सुवेदी लिडिङ्गमा !
भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले अग्रता लिएका छन् । गठबन्धनको तर्फबाट माओवादीकी उम्मेद्वार रेनु दाहाललाई सुवेदीले २९ मतले पछि पारेका हुन् । सोमबार विहान साढे ३ बजेसम्म भरतपुर महानगरको ८ हजार ५ सय ९१ मत गन्दा सुवेदीले ३ हजार ७५ मत ल्याएका छन् भने दाहालले ३ हजार ४६ मत ल्याएकी छिन् । […]
April 21, 2022 sujaLeaveaComment on ए मर्द ! सक्छौ भने सम्बन्ध राख्न आऊ
लेख्न खोजेको विषय अर्कै थियो । ल्यापटप नखोलेको पनि ३९ दिन भइसकेछ । चार्ज सकिएको । रातको ९ बजेर एक मीनेट जाँदा बल्ल खुल्यो ल्यापटप । साइडमा भएको मोबाइल पनि चलाइरहेको थिएँ । मोबाइलमा फेसबुक खुलेको थियो । म्यासेञ्जरमा एक महिलालाई कल गरें । कहिलेकाहीं कुरा हुन्थ्यो । एकै पटकमा कल रिसिभ भएको घटना निकै कम हुन्थ्यो । तर आज अचम्मै भयो, एक घण्टीमा […]
चर्चित फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई विश्वकै धनी खेलाडीमा गनिन्छ । खेलकुदबाहेक उनी आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका कारण पनि चर्चामा रहन्छन् । यसपटक उनी फेरी गर्लफ्रेन्ड जर्जिना रोड्रिग्वेजको कारण चर्चामा छन् । एक रिपोर्टका अनुसार रोनाल्डोले आफ्नी प्रेमिकालाई खर्चका लागि हरेक महिना १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक दिन्छन् । एल नेसिओनलले रोनाल्डोले गर्लफ्रेन्डलाई दिने पैसालाई तलब भनेको […]
शंकास्पद ढंगले अमेरिका प्रवेश गरेका १० नेपालीलाई त्यहाँको अध्यागमनले निष्काशन गरेको छ। उनीहरु गैरकानुनी ढंगबाट अमेरिका प्रवेश गरेका थिए। उनीहरु कहिले अमेरिका प्रवेश गरे भन्ने विषय खुलेको छैन। अमेरिकाको अध्यागमनले गैरकानुनीरुपमा छिरेका नेपालीहरु राजु पौडेल, प्रविन बस्नेत,पेम्बा लामा, ध्रुब कुमार र शंकर विष्ट मगरलाई निष्काशन गरेको हो। अमेरिकाको अध्यागमनले लुकीछिपी बस्दै आएका छिरिङ, शेर्पा, तेज […]
आज श्री शाके १९४४ बि.स.२०७८ साल चैत्र २९ गते मंगलबार इश्वी सन २०२२ अप्रिल १२ तारीख चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशि तिथी मघा नक्षत्र शुल योग वणिज करण चन्द्रमा सिंह राशिमा आनन्दादि योगमा आनन्द योग नल नाम संवत्सर सुर्य उत्तरायण बसन्त ऋतुकामदा एकादशीव्रत, विश्व ज्योतिष महासंघ २६ औं स्थापना दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे मेष राशि (चु, चे, […]
तारिखमा अदालत पुगेका कृष्ण जोशीले पल शाहलाई भेटेपछि मिडियामा आएका छन्। उनले पल शाहलाई भेटेपछि धेरै नै दुखि हुदै मिडियामा आएका हुन्। उनले पहिलेको पल शाह र अहिलेको पल शाहमा धेरै नै फरक पाएको बताएका छन्। निहाउरो अनुहार बनाएर आखा धेरै नै रातो बनाएका थिए सायद नसुतेर होला , मलाई त यति गार्हो भयो उहालाई […]